i Pelé Ve No Nampitsahatra Ny ady an-trano Nisy Rà Mandriaka Be Indrindra teo amin’ny Tantaran’i Nizeria Nandritry ny 48 Ora? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2015 2:10 GMT
Mpitsoaponenana mosarena nandritry ny ady an-rano tao Nizeria. Niteraka hanoanana nandravarava tao Biafra Biafra nandritry ny fifandonana ny fahirano nataon'i NizeriaSary natoa ho an'ny sehatry ny daholobe, avy amin'ny Foibe Fanarahana maso sy Fisorohana ny Aretina (CDC).
Nandritra ny taona maro, betsaka ny tatitra avy amin'ny tambajotra lehibe mpanome vaovao fa hoe i Pelé, ilay mpanjakan'ny baolina kitra, no nanajanona ny Ady an-trano Nizeriana, rehefa nametraka fitaovam-piadiana ny roa tonta mba hahafahan'ny Nizeriana hijery azy sy ny kliobany Breziliana Santos milalao.
Nitranga teo anelanelan'ny 6 Jolay 1967 sy 15 Janoary 1970 ny ady an-trano Nizeriana tamin'ny fisintahan'ny fanjakan'i Biafra tamin'i Nizeria. Iray amin'ireo ady an-trano nisy rà mandriaka be indrindra tany Afrika.
Nefa matetika ny media no milaza fa noho i Pelé no nahatonga ny fitsaharan'ny poabasy, na dia vonjimaika aza izany. Ny gazety Amerikana TIME, ohatra, dia nanao tatitra tamin'ny taona 2005:
Na efa nanandrana nampitsahatra ny ady nandritra ny roa taona aza ny diplaomaty sy ny iraka, tao anatin'ny ady an-trano nisy rà mandriaka be indrindra tany Afrika tamin'izany fotoana izany, ny fahatongavan'i Pelé ,ilay Breziliana sangan'ny baolina kitra tamin'ny 1969, tany Nizeria no nitondra fitsaharan'ny poabasy nandritry ny telo andro. Nanaiky ny fampiatoana ady ny governemanta sy ny Repoblika mpisintak'i Biafra mba hahafahan'ny ekipany, Santos, manatanteraka lalao fampirantiana roa mifanandrina amin'ny ekipa eo an-toerana. Nandritry ny 72 ora, ny baolina kitra no zava-dehibe kokoa noho ny ady.
Fa tena nampitsahatra marina ny adin'ny Biafran tao Nizeria ve i Pelé? Izany no fanontanian'i Olaojo Aiyegbayo (@olaojo15), mpanoratra monina ao Huddersfield, Angletera, nandeha tany amin'ny fitahirizana mba hahita ny marina.
Pele manao ny fanamian'ny Santos FC tamin'ny taona 1970. Sary ho an'ny Sehatry ny Daholobe nataon'i El Gráfico.
Tao amin'ny lahatsoratra am-bilaogy mikasika ny Firenena iray i Afrika, manazava i Olaojo Aiyegbayo fa ny hahazoam-bola ho an'ny klioba amin'ny alalan'ny saram-pisehoana no tena tanjon'ny fitetezam-paritra Afrikana. Nitondra ny ekipa tany Congo, Nizeria, Mozambika, Ghana ary Alzeria ny fitetezam-paritra.
Noho izany nitsahatra àry ve ny ady? Ilay tantara, araka ny fikarohana nataon'i Aiyegbayo, dia angano. Na teo aza ny fivoahany tamin'ny tambajotra lehibe mpanome vaovao iraisam-pirenena, tsy voalaza mihitsy tao amin'ny gazety ao an-toerana izay nandrakotra ny fitetezam-paritra nataon'ny Santos izany. Pelé izy tenany aza tsy nilaza ny fitsaharan'ny poabasy tao anatin'ny tantaran'ny fiainany 1977 “Ny Fiainako sy ny Lalao Kanto”. Na izany aza, nolazainy izany tao amin'ny tantaran'ny fiainany 2007 “Pelé: Ny Tantaran'ny Fiainana”.
Manonona an'i Pelé i Aiyegbayo amin'ny tantaram-piainany 2007:
“Nefa nahazo antoka tokoa ny Nizeriana fa tsy hanafika an'i Lagos ny Biafrana raha mbola teo izahay.” Nahatsiaro ny “fisian'ny miaramila maro teny an-dalambe izy” ary ny fiarovana avy amin'ny tafika sy ny polisy nandritra ny fijanonan'izy ireo tany Nizeria.
Nilaza ihany koa izy ao amin'ny bokiny fa nanome toky ny mpilalao ny tale ara-barotry ny Santos fa hijanona ny ady an-trano Nizeriana noho ny lalao fampirantiana ataon-dry zareo ary tsy ho olana ho an'ny manampahefana izany.
Na izany aza, manamarika i Aiyegbayo fa tsy nanala ny fisalasalàny i Pelé momba ny tantaran'ny fitsaharan'ny poabasy nandritra ny tafatafa nataony tamin'ny CNN 2011. Vakio ny lahatsoratra feno, famotehana ny tantara diso, nosoratan'i Aiyegbayo ao amin'ny bilaogy Firenena iray i Afrika.